१. प्रधानमन्त्री न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मंगलबार उमेर हदका कारण सवोर्च्च अदालतको आफ्नो पदबाट अवकास लिएकी छन्। उमेर हदका कारण अवकास हुनु सामान्य कुरा हो। तर सुशीला कार्की जे जति चर्चित भएर प्रधान न्यायाधीश भएकी थिइन् र अवकासमा जानु अघि जे जसरी विवादित बनिन्, त्यसलाई साधारण र सामान्य भन्न मिल्दैन। २. न्यायको क्षेत्रमा उनको छवि आफ्नै किसिमको थियो। उनी निडर, निर्भिक… पुरा पढौ
१.एनसेलले धेरै समयपछि १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको समाचार आएको थियो। त्यसअघि सोही कम्पनीले ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। त्यसले तिर्नुपर्ने रकममध्ये यो पूरा होइन। अझ त्यसले कति अर्ब तिर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसको पूरा हिसाब-किताब भएको छैन। २. कर तिर्ने र कर निर्धारण गर्ने सामान्य प्रक्रिया हो। पूँजीगत लाभकर पनि त्यस्तै एक प्रक्रिया हो। त्यसो… पुरा पढौ
१. महावीर पुन अन्तर्राष्ट्रिय म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त गरेर चर्चित भएका थिए भने अहिले उनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि सो पुरस्कारबाट प्राप्त तक्मा बिक्री गर्न खोज्दा फेरि चर्चित भएका छन्। उनको सो पुरस्कार नेपालमा बिक्री नभएपछि आफ्नो एक साथीका साथ बिक्रीका लागि अमेरिका पठाएका छन्। २. उनले आफूले पाएको सो तक्मा लिलाम बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसले समाजमा तरङ्ग पैदा गरेको… पुरा पढौ
राजपा र चुनाव
१. सरकारले स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकाई सहभागी बनाउन धेरै प्रयास गर्दै आएको छ। सरकारले त्यस पार्टीको मागलाई दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको तैयारी गरेको सर्वविदितै छ। तर त्यो संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउन आवश्यक दुर्इ तिहाई बहुमत नजुट्ने भएपछि त्यो प्रस्ताव त्यसै रहेको छ। २. सरकारले त्यस पार्टीकाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले चुनावको मिति पर सारेको छ। एकै चरणमा… पुरा पढौ
बजेटको कार्यान्वयनमा जोड
१. सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब, ७८ अर्ब, ९९ करोड, ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। बजेटमा नयाँ कार्यक्रम केही नभए तापनि बजेट ठूलो बनाइएको छ। २. बजेटमा सडक पूर्वाधारमा ८९ अर्ब, ५० करोड शिक्षामा ६६ अर्ब १२ करोड,… पुरा पढौ
स्थानीय नेतृत्व र उत्साह
१. यो एक सुखद संयोग हो कि अहिले देशभरका स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व आएका छन्। २० वर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा एउटा उत्साहको वातावरण बनाएको छ। देश बनाउन चाहनेहरुका लागि यो एक उपयुक्त अवसर हो यो अवसरलाई "क्याश" गरेर नेतृत्वमा रहेकाहरु अन्त कतै नअल्मलिएर अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। २. हामीकहाँ धेरै मानिसको पुरानालाई गाली गलौज गर्ने बानी छ।… पुरा पढौ
अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठ रहेनन्
१. नेपालका गम्भीर अनुसन्धानकर्ताको रुपमा देश विदेशको विद्वान वर्गमा ख्याति कमाएका कीर्तिपुर निवासी शुक्रसागर श्रेष्ठको यही जेठ ४ गते आफ्नै निवास कीर्तिपुरमा निधन भयो। उनी ६५ वर्षका थिए। केही महिनादेखि उनी मधुमेह लगायतका विविध रोगहरुबाट पीडित थिए। २. अनुसन्धानकर्ता श्रेष्ठ विद्यार्थी अवस्थादेखि नै इतिहास, पुरातत्व र उत्खनन्मा रुचि राख्थे। विश्व विद्यालयको अध्ययन पूरा गरी उनी सरकारी सेवामा लागे। उनी पुरातत्व… पुरा पढौ
प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा
१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको राजीनामालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छिन् र अको व्यवस्था नभएसम्म सोही पदमा रही काम गरिरहन राष्ट्रपतिले आग्रह गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री दाहालले काङ्ग्रेससँग भएको सहमति अनुसार आफूले राजीनामा गरेको बताएका छन्। २. उनको राजीनामाका साथ उनको कार्यकालको सफलता र असफलताबारे चर्चा हुन थालेको… पुरा पढौ
अख्तियार प्रमुखको चुनौती
१. नवनियुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख दीप बस्न्यातले आफ्नो पदभार सम्हालेका छन्। यसअघि उनी कार्यवाहक प्रमुख भएर काम गरिरहेका थिए। उनी प्रमुखमा नियुक्त भएपछि अब उनले के कसरी काम गर्लान् भनेर चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ। २. अख्तियार प्रमुख बस्न्यातको लागि यो अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। अवसर त उनले पाइसकेका छन्। तर आफ्नो अगाडि आइपरेको चुनौतीलाई उनले… पुरा पढौ
१. अहिले २० वर्षपछि स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतगणना सम्पन्न हुन गइरहेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको समाचार पनि आइरहेको छ। गाउँ सहरमा जताततै उत्साहको माहोल व्याप्त छ। २. चुनाव समग्रमा शान्तिपूर्वक भएको छ। शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न भएकाले पनि अहिले उत्साहको वातावरण पर्याप्त भएको हो। त्यसको लागि सरकार र निर्वाचन आयोग धन्यवादका पात्र भएका छन्। पहिलो… पुरा पढौ